नयाँ शक्ति र नेपाली कांग्रेसबीच गोरखाका दुवै क्षेत्रमा चुनावी तालमेल – Setosurya
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नेतृत्वको वाम गठबन्धनबाट बाहिरिएको केही दिनमै नयाँशक्ति नेपालले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेको छ।
डा. बाबुराम भट्टरार्इ नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी र नेपाली कांग्रेसबीच गोरखाका दुवै क्षेत्रमा चुनावी तालमेलको सहमति भएको हो । सहमति अनुसार गोरखा क्षेत्र नम्बर २ मा नयाँ शक्तिबाट बाबुराम लड्ने भएका छन् भने क्षेत्र नम्बर १ मा नयाँशक्तिले कांग्रेसका उम्मेदवारलार्इ सघाउने भएको छ ।
यी दुर्इ दलहरूबीच राजधानीमा भएको सहमति अनुसार गोरखामा प्रदेश सभामा पनि दुई दलबीच तालमेल हुने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता चीनकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार गोरखा २ को एउटा प्रदेशसभा सदस्यमा नयाँ शक्ति र एउटामा कांग्रेस उठ्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी गोरखा १ का दुबै प्रदेशसभा सदस्यका लागि नयाँ शक्ति नेपालले कांग्रेसलाई सघाउने टुंगो भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट संसदमा मूख्य सचेतक समेत रहिसकेका श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाका लागि चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन् ।
वाम गठबन्धनका सदस्य बाबुरामलाई माओवादी केन्द्रले गोरखा २ बाट टिकट दिन अस्वीकार गरेपछि नयाँ शक्ति गठबन्धनबाट बाहिरिएको थियो ।
बाबुराम यसअघि भएका दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट अत्यधिक मतसहित निर्वाचित भएका थिए । गोरखा २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश एमाले-माओवादी गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बन्दैछन् ।
किन शीर्ष किनहरु शीतल निवास बोलाईए ?
देउवालाई ओलीको चेतावनी–संसदको म्याद थप्ने सपना नदेख्नु
दलहरुको चुनावी घोषणापत्र : ‘लोकप्रिय नारा र कार्यक्रम समेट्ने होड’
केन्द्र सार्ने विवादले पर्वतको पैंयु गाउँपालिका अनिश्चितकालका लागि बन्द
नेकपाको एकतामा लफडा शुरु, काठमाडौंमा बन्यो समानान्तर कमिटी
संसद चल्न नदिए अर्को दुर्घटना : देउवा
बाम गठबन्धनका उम्मेदवार लक्षित गरि बम हान्नेको प्रतिकार गर्न युवा दस्ता ! यस्तो छ तयारी :
यस्तो शर्तमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा उपेन्द्र यादवको समर्थन !
ओलीलाई साथ दिँदै प्रचण्डले भने, ‘दुवै जना प्रधानमन्त्री भईसकेका छौ, हामीलाई पदको लोभ छैन’